Akhriso Khudbad: Muuse Biixi oo aqbalay raaligelintii Farmaajo, kana warbixiyey kulankii Addis Ababa – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 Last updated Feb 18, 2020
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo khudbad sanadle ah u jeediyey golaha wakiilada & golaha guurtida ee maamulkaasi ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah, sida kulankii uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya ee Addis Ababa, ‘booqashada’ Farmaajo ee Hargeysa, dhaqaalaha, amniga, shaqo la’aanta dhalinyarada, doorashooyinka qaranka iyo siyaasadda arimaha dibadda ee Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kale inta uu waday khudbad-sanadedkiisii 3-aad soo hadal qaaday arrimo ku saaban booqasho la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya iyo ra’iisul wasaaraha Itoobiya ku tegayaan magaalada Hargeysa.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayey raallgelintii uu madaxweynaha Soomaaliya ka bixiyey dhibaatadii loo geystay reer Somaliland ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo garawshiyaha uu Farmaajo ka bixiyey ‘xasuuqii’ dhacay qarnigii tegay.
Siyaasadda dibadda Somalind.
Sidoo kale dalalka Turkiga, Swden iyo kuwa kale oo uusan carab baabin ayuu sheegay inay daneynayaan ictiraafkooda, sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn khubadda uu maanta jeediyey Muuse Biixi Cabdi wuxuu kaga hadlay shaqo la’aanta heysata dhalinyarada ku dhaqan Somaliland iyo daruufaha adag ee ay wajahayaan, wuxuuna shaaciyey in xukuumaddiisu ay sameysay sanduuq gaar ah oo lagu horumarinayo dhalinyarada oo haatan ay ku bixiyeen lacag dhan 200,000 oo dollerka Mareykanka ah.